Sagrada Familia - Andiany vaovao Netflix | Bezzia
Sagrada Familia: Andiana Netflix Espaniola Vaovao
Susana godoy | 12/10/2021 14:00 | ankehitriny
Netflix dia mbola gaga ihany indraindray. Satria marina fa isaky ny matetika dia mandefa andian-tolo-kevitra ho votoatiny izy, fa amin'ity tranga ity dia nahagaga ilay izy rehefa nanambara Sagrada Familia. Iray amin'ireo andiany Espaniôla izay manana mpilalao mahay ary izay kely no fantatra hatreto, saingy azo antoka fa hanome be horesahina.
Hatramin'izao dia manao azy io ary antsipiriany roa ihany no fantatra. Ny sasany amin'izy ireo dia amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy sasany sy avy amin'ny sasany amin'ireo lohahevitra misaina ihany. Fa mendrika hotononina io satria rehefa tonga eo amin'ny efijery kely aho ho tena revolisiona io, azo antoka. Fantaro ny momba azy rehetra!
1 Tsy ampoizina i Netflix
2 Iza ireo maherifo an'i Sagrada Familia?
3 Hevitra avy amin'i Manolo Caro
Tsy ampoizina i Netflix
Marina fa manaitra antsika indraindray i Netflix satria manana atiny tena midadasika. Eo anelanelan'ny andian-tantara sy ny sarimihetsika, indraindray isika dia tototry ny saina loatra satria tsy fantatsika izay safidintsika. Marina ihany koa fa indraindray isika dia miandry ny premieres satria efa nambaran'ny sehatra izy ireo, mba hahafahantsika rehetra manao karazana fandaharam-potoana. Saingy amin'ity tranga ity dia tsy toy izany ary toy ny tsy nampoizina ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tonga ny vaovao fa andiany Espaniôla vaovao no tetikasan'ilay sehatra. Saingy tsy izany ihany, fa manana endrika malaza be eo amin'ny sehatry ny firenena koa izy ary avy amin'ny fijinjana fahombiazana maro hafa.
Iza ireo maherifo an'i Sagrada Familia?
Najwa Nimri Izy dia iray amin'ireo endrika malaza indrindra amin'ny sehatra nasionaly. Nanomboka niara-niasa tamin'i Santiago Segura izy fa nanao ny dingana niaraka tamin'i Amenábar ihany koa, mandra-pahazoany ny iray amin'ireo anjara asany malaza indrindra amin'ny andiany 'Vis a Vis'. Mazava ho azy fa tsy afaka manadino ireo vanim-potoana nidirany tao amin'ny 'La casa de papel'. Ankehitriny dia ho gaga ianao ao Sagrada Familia, tsy azonay antoka izany. Alba Flores dia iray amin'ireo anarana malaza izay mahazo tanjaka ary tsy mahagaga. Ankoatry ny maha mpiara-miasa amin'i Najwa azy dia miverina ho anisan'ny iray amin'ireo mpilalao lehibe amin'ny efijery kely izy ankehitriny. Samy 'Vis a Vis' sy 'La casa de papel' no nahatonga azy nahazo loka maro.
Fa io koa dia ilay mpilalao dia ilay tanora Carla Campra izay hitantsika tamin'ny 'diarin'ny miafina amin'ny tanora' sy amin'ny 'The other look'. 'Fugitivas' na 'Ánimas' dia sasantsasany amin'ireo anaram-boninahitra nahitanay an'i Iván Pellicer niasa. Ankoatr'izay, Macarena Gómez iray hafa mpiara-dia akaiky aminy koa, izay fantatsika indrindra amin'ny anjara asany Lola ao amin'ilay 'Ilay Tonga', fa manana tantara efa ela koa ao aoriany.
Hevitra avy amin'i Manolo Caro
Ho fanampin'ireo tarehy fantatra rehetra, izay tsy vitsy, Manolo Caro dia navoaka tao amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo. Manazava hoe avy aiza ny hevitra hoe manao asa toy izao. Toa tsy zava-baovao izy io, fa misy zavatra misaintsaina bebe kokoa satria roa taona mahery no nananany ny hevitra sy ny faniriana hahafahany manolotra ny besinimaro izay tao an-tsainy. Eny, tompon'andraikitra amin'ny 'The House of Flowers' izy, izay iray amin'ireo fahombiazana lehibe tokony hojerena. Raha ny fahitana azy dia efa mandeha ny fandraisam-peo ary atao ao Madrid. Ka hatramin'ny nivoahan'ny vaovao momba ny andian-tantara toy izany dia miandry vaovao ny tsirairay, hahafahany mankafy zavatra hafa, mikasika ny tetika na ny toetrany amin'ny ankapobeny. Ho hitanao ve izany rehefa mivoaka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Sagrada Familia: Andiana Netflix Espaniola Vaovao
Ny fanazaran-tena miverina amin'ny barbel tsara indrindra
Ny tombony azo amin'ny poti programmable